सन्दिप लामिछानेले लिए एक ओभरमा दुई विकेट
३१ साउन । नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) मा बिहिबार बिहान एकै ओभरमा दुई विकेट लिएका छन्। टस जितेर पहिले बलिङ गरेको सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रियट्सका लागि सन्दिपले ४ ओभर बलिङ गर्दै २१ रन खर्चिएर २ विकेट लिए।…
३० साउन । कामको शिलशिलामा अमेरिकामा रहँदै आएका वीरेन्द्रनगर ११ का खेमराज ढकालले विद्यालयलाई सहयोग गरेका छन् । उनले धुलियाबिटस्थित श्री शिव माध्यामिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न १ लाख १ हजार १ सय ५ रुपैया सहयोग गरेका हुन् । बुधबार विद्यालयमा आयोजित…
एमयुमा बिए एलएलबी कक्षा शुरु हुँदै
२९ साउन । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयु) सुर्खेतमा यसै शैक्षिक सत्र देखि कानुन तर्फको बिए एलएलबी कक्षा शुरु हुने भएको छ । प्लस टु सकेका विद्यार्थीहरुका लागि ५ बर्षे सेमिटेक्निकल कार्यक्रमको रुपमा शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ देखि विश्वविद्यालयले भर्ना आवेदन खुल्ला गरेको हो । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार…
भुकम्पले क्षति पुर्‍याएको विद्यालय किन मर्मत हुनसकेन? कहाँ गयो १३ लाख ४१ हजार?
२८ साउन । ७२ साल बैशाख १२ गते नेपालमा ठूलो भुकम्प गयो । भूकम्पको केन्द्र गोर्खाको बारपाक रहेपनि यसले पश्चिम नेपाल पनि हल्लायो । यसैबेला सामान्य क्षति भएको सुर्खेतको एउटा विद्यालय हालसम्म पनि मर्मत हुन सकेको छैन । यद्धपी विद्यालय भवन पुर्ननिर्माणका लागि रकम…
तीन दिनभित्र माग पूरा गर्न ६ विद्यार्थी संगठनको माग
२७ साउन । सुर्खेतको विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पसमा मनोमानी ढंगले शिक्षक नियुक्ति गरेकोप्रति विभिन्न ६ विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेका छन् । आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाली उनीहरुले क्याम्पस प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चार बुँदे माग राख्दै विद्यार्थी संगठनहरुले तीन दिनभित्र आफ्ना माग पूरा…
डा. केसीको ‘क्लिन सुर्खेत, ग्रिन सुर्खेत’ अभियान शुरु
२७ साउन । वीरेन्द्रनगरलाई स्वच्छ, सफा र हरियाली शहरको रुपमा विकास गर्न वीङ्स फाउण्डेशन सुर्खेतले ‘क्लिन सुर्खेत, ग्रिन सुर्खेत’ अभियानको शुरुवात गरेको छ । शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त अभियान शुरु गरिएको हो । बाल रोग विशेषज्ञ एवं फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा.…
२६ साउन । बाँझोपनको समस्या पछिल्लो समय विश्वभर बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा सन्तानको चाहमा रहेका धेरै दम्पती निराश हुँदै आएका छन् । बाँझोपनको कारण महिला वा पुरुष दुवै हुन सक्छन् । पुरुषका कारण हुने बाँझोपनको मुख्य कारण वीर्यमा शुक्राणुको मात्रा आवश्यक भन्दा…
२५ साउन । सुर्खेत कारागार भवनको क्षमता पचास जनाको हो । तर त्यहाँ १ सय ९७ जना कैदीबन्दी छन् । यतिका कैदी राख्नुपर्दा थुपै समस्या बेहोर्नु परेको कारागार कार्यालय सुर्खेतका जेलर लालबहादुर खत्रीले बताए । उनले भने, ‘कारागार कार्यालय सुर्खेतको भवन क्षमता…
तस्बिरमा २४ औं आदिवासी दिवस
२४ साउन । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा २४ औं आदिवासी दिवस मनाइएको छ । उक्त अवसरमा कर्णाली प्रदेश सभाकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती मगरले अब बन्ने कानुन आदिवासीमैत्री हुने बताएकी छन् । वीरेन्द्रनगरस्थित खुला मञ्चमा आयोजित आदिवासी दिवसको अवसरमा सेरोफेरोले खिचेका केही तस्बिर…
२४ साउन । हुम्लाका सात गाउँपालिकामा वितरण शुरू गरिएको गरिब घर परिचय पत्र हुनेखानेलाई वितरण गरेको पाइएको छ । तत्काली जिल्ला विकास समितिले गरिब घर परिवारको तथ्याङ्क संकलन गर्दा वास्तविक गरिब छुटेको र सम्पन्न व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराएको भन्दै स्थानीयहरुले उजुरी गरेका छन् ।…